WARBIXIN: Kadib In Barcelona Ay Andres Iniesta Ka Saxiixatay Heshiis Noloshiisa Oo Dhan Ah, Wax Badan Ka Ogaw Waxyaabihii Ugu Muhiimsanaa Waayihiisa Ciyaareed Ee Camp Nou. – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Kadib In Barcelona Ay Andres Iniesta Ka Saxiixatay Heshiis Noloshiisa Oo Dhan Ah, Wax Badan Ka Ogaw Waxyaabihii Ugu Muhiimsanaa Waayihiisa Ciyaareed Ee Camp Nou.
Madax waynaha kooxda Barcelona ee Bartomeu ayaa ugu danbayn iska xaliyay mid ka mid ah dhibaatooyinkii waynaa ee xili ciyaareedkan soo haystay wuxuuna Andres Iniesta ka saxiixay heshiis noloshiisa oo dhan uu ku qaadanayo kooxda Barcelona . Kabtanka Barcelona ee Andres Iniesta ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu waayihiisa ciyaareed ugu sii wadan doono kooxdii uu tan iyo carruurnimadiisii ka soo tirsanaa ee Barcelona.
Andres Iniesta ayaa sanadkii 1996 kii waxa uu qayb ka noqday Barcelona waxayna hadda da’diisu tahay 33 sano jir isaga oo tan iyo markii uu yaraa ka soo tirsanaa Barcelona laakiin maamulka Camp Nou ayaa go’aan ku gaadhay in ay Iniesta ku abaal mariyaan heshiis uu noloshiisa oo dhan ugu qaadan karo Barcelona inta uu isagu doonayo.
. @andresiniesta8 = @FCBarcelona DNA#ForeverIniesta
Kulankiisii Ugu Horeeyay Ee Barcelona:
Andres Iniesta ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda kowaad ee Barcelona waxa uu saftay October 29, 2002 markaas oo ay Barca 1-0 ku soo garaacday kooxda ree Belgium ee Bruges wuxuuna ahaa kulankii shanaad ee heerka groupyada CHampions Leaque. Iniesta ayaa markaas ahaa 18 sano jir waxaana kulankiisii ugu horeeyay ee Barcelona soo safay Louis van Gaal.
Xili Ciyaareedyadii Uu Iniesta Ka Soo Tirsanaa Barca:
Andres Iniesta ayaa Barcelona ku qaadanaya xili ciyaareedkiisii 16 aad isaga oo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee 2002/03 ciyaaray sagaal kulan oo kaliya balse tan iyo markaas wixii ka danbeeyay waxa uu xubin muhiim ah ka ahaa koox kasta oo Camp Nou ka soo ciyaartay isaga oo tababarayaal kala duwan la soo shaqeeyay.
Goolkiisii Ugu Horeeyay Ee Uu Iniesta U Dhaliay Kooxda Kowaad Ee Barca:
Andres Iniesta ayaa goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda kowaad ee Barcelona dhaliyay January 14,2004 kii markaas oo uu shabaqa ka soo taabtay kooxda Levante kulan ka tirsanaa koobka boqorka Spain ee Copa Del Rey wuxuuna dhaliyay goolkii furitaanka ee guushii 3-1 ahaye ee ay Barcelona kulankan soo gaadhay.
Koobabka Uu Iniesta Kula Soo Guulaysatay Barcelona:
Andres Iniesta ayaa ka mid ah xidigaha ugu koobabka badan kubbada cagta wuxuuna muddadii uu Barcelona ka soo ciyaarayay ku soo guulaystay 30 koob oo kala ah 8 Ligas, 4 Champions League, 7 Supercopas de España, 5 Copa del Rey, 3 UEFA Super Cup iyo 3 Club World Cup wuxuuna koobabkan kala mid yahay Lionel Messi.
Kulamada Uu Iniesta uu Soo Ciyaaray Barcelona:
Andres Iniesta ayaa ah xidiga labaad ee ugu safashada badan Barcelona waxaana ka horeeya Xavi Hernandez oo kaliya isaga oo ilaa hadda kooxdiisa Balaugrana u soo ciyaaray 639 kulan halka Xavi uu rekoodhkan ku haysto 767 kulan waxaana kaalinta saddexaad 594 kulan ugu jira Lionel Messi oo dhawaan soo dhaafay Puyol.
Andres Iniesta ayaa Barcelona u soo cyaaray 418 kulan oo horyaalka Spain ee La Liga ah, wuxuuna 126 kulan ka soo ciyaaray Champions Leaque halka UEFA Europa leaque uu soo ciyaaray 3 kulan. Iniesta ayaa sidoo kale waxa uu kulamo ka soo ciyaaray tartamada Copa del Rey (68), Supercopa de España (14), UEFA Super Cup (3) iyo Club World Cup (7).
Goolashii Uu Andres Iniesta U Soo Dhaliyay Barcelona iyo ka Ugu Xusuusta badan:
Iniesta ayaa Barcelona u soo dhalyay 55 gool isaga oo 34 ka soo dhaliyay horyaalka Spain ee La Liga halka 11 gool uu ka soo dhaliyay Champions Leaque laakiin goolkiisa ugu xusuusta badan isla markaana uu taariikhda gool dhalinta Barcelona ugu jiro ayaa ah goolkii wadno xanuunka ahaa ee uu Stamford Bridge ku dhaliyay si uu kooxdii Guardiola ee Barcelona uu ka soo saaray xaalad aad u adkayd. Iniesta ayaa sidoo kale 9 gool ka dhaliyay Copa Del Rey wuxuuna hal gool ka soo dhaliyay Spanish Super Cupka.
Kabtanimada Barcelona iyo muddadii uu Iniesta hayay:
Iniesta ayaa calaamada kabtanimada Barcelona markii ugu horaysay xidhay xili ciyaareedkii 2008/09 kii laakiin waxa uu si rasmi ah ula wareegay xili ciyaareedkii 2015/16 markaas oo uu Xavi Hernandez ka baxay Barcelona wuxuuna Iniesta ilaa hadda Barcelona isaga oo kabtan ah uu soo hogaamiyay 120 kulan.